Bluboo S3 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်အခြားအရာများ ထိုက်တန်သလား။ | Androidsis ပါ
Bluboo S3 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
တခါထပ်ငါတို့ရပြီ Bluboo မှအခြားကိရိယာတစ်ခုကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ရန်အခွင့်အလမ်း။ ဤအချိန်ကအလှည့်ဖြစ်ခဲ့သည် Bluboo S3, တစ် ဦး priori နှင့်၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအလယ်အလတ်အကွာအဝေးအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းမော်ဒယ်။
ကျနော်တို့ကအတွေ့အကြုံကနေငါသိ၏ အားလုံးအမြင်များနှင့်အတူအစွမ်းထက်စမတ်ဖုန်း အားလုံးရှုထောင့်၌တည်၏ အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုမပေးပါဘူး။ အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်စမတ်ဖုန်း၏အောင်မြင်မှုအတွက် "ပထမနှုန်း" သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မလုံလောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
1 Bluboo S3, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံသည်
3 box ကို contents တွေကို
4 Bluboo S3 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
5 မျက်နှာပြင်ကြီးနှင့် resolution ကြီးမားသည်
6 Bluboo S3 ၏ Hardware နှင့် Power
8 Bluboo S3 ကင်မရာများနှင့်ဓာတ်ပုံပညာ
9 Bluboo S3 ဘက်ထရီသည်၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
11 Bluboo S3 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုကြိုက်သည်
Bluboo S3, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံသည်
Bluboo S3 အသစ်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စမ်းသပ်နိုင်လောက်အောင်ငါတို့ကံကောင်းခဲ့တယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာငါတို့ကိုရူးသွပ်စေတဲ့ကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီးတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အထူးသဖြင့်ဒီဖုန်းကငါတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူး။
Bluboo S3 ကိုမျှတမှုမရှိသောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူများ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းစီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ပင်ဆင်တူကြောင်းအောင်မြင်ကြပြီမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့။ အချို့သောအရာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေနှင့်အချို့မှာပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ်သောချိန်ခွင်လျှာကိုမတွေ့ပါက၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ၏ပျမ်းမျှပမာဏသည်တန်းတူဖြစ်သည်။
El ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင် အသစ်က Bluboo S3 ကိုဖေါ်ပြခြင်း ရဲဖြစ်ခြင်းများအတွက်ထွက်မတ်တပ်ရပ်မထားဘူးမရ။ ဒီဇိုင်းကဏ္ section သည်မလိုအပ်သောစွန့်စားမှုများမခံရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ The ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးလိုင်းများသည်ဂန္ထဝင်ဆုံးဖြစ်သည်အရှေ့ဘက်တွင် ၆ လက်မ panel တစ်ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့သော်လည်း၊ 18:9နောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံ။ ကျနော်တို့ပြောနေတာမညီမျှမှု၏ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခု။ ဤနေရာတွင်သင်၏ Bluboo S3 ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ BLUBOO S3
ကိရိယာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ကြီးမားသောတစ်ခုကိုတွေ့သည် Sharp မှထုတ်လုပ်သည့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင် resolution ကိုကမ်းလှမ်း Full HD ကို +။ ကျနော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ တိုကျရိုကျ ထိုသို့ နီးပါးရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူအလုပ်များ သင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်။ 18:9အချိုးကအရမ်းအဆင်ပြေတယ်။
ငါတို့ကအမြဲရှာရတာကြိုက်တယ် LED အသိပေးချက်အလင်းအိမ်မရ။ ထိပ်မှာစပီကာဘေးမှာ။ ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အခြားအသိပေးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သောအရောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အမြဲပြောခဲ့သလိုပဲသင်အမြဲတမ်းဖုန်းသုံးတဲ့အခါမှသာသင် LEDs များပျောက်သွားမှာပါ။ အကယ်၍ သင်၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးပါကအရောင်နှင့်ရိုးရှင်းသောအလင်းသည်အရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
မူဘောင် မျက်နှာပြင်ကိုaနှင့်တည်ဆောက်ထားသည် အစွမ်းထက်သောအနက်ရောင်သတ္တုအလွိုင်း။ ထိတွေ့မှုကြောင့်၎င်းသည်ကြံ့ခိုင်ပုံရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မည်သို့ခုခံတွန်းလှန်ကြောင်းနှင့်ကြည့်ရသည်မှာသေချာသည်။ စမတ်ဖုန်းအမြောက်အများသည်အနားအနားစွန်းများပေါ်ကျဆင်းသွားပြီးသူတို့၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သည်ကိန်းဂဏန်းများစွာကိုဆုံးရှုံးစေသည်။
el en ဘယ်ဘက် တည်ရှိသည် ခလုတ်နှစ်ခု။ တစ်ခုမှာသူ့အဘို့ elongated အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှု, နှင့်များအတွက်အသုံးပြုသောသေးငယ်တဲ့တစ်ခု သော့ခတ်ပြီးသော့ဖွင့်။ အပေါ်ပိုင်းကခလုတ်တွေမပါပါဘူး။ ထဲမှာ ညာဘက်ခြမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် SIM ကဒ်များအတွက် slot ကိုရှာသည်, y ကဒ်အတွက် မှတ်ဉာဏ်။
ပြီးတော့ အောက်ခြေ ကျနော်တို့ကဗဟိုထဲမှာရှာပြီးသူတို့တည်ရှိရာတွင်းများကလိုက်ပို့သည် စပီကာနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းအဆိုပါ USB Type C connectorမရ။ နောက်ထပ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏သင်္ကေတမှာပိုမိုခေတ်မီသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည် mini Jack audio port ကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
ထဲမှာ နောက်ဘက် ဒီ Bluboo S3 ရဲ့အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်စရာတွေထဲကတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်း စက်ရပ်စဲမှုအတွက် ငါတို့မကြိုက်ဘူး မဆို ငါတို့တွေ့တယ် ပလပ်စတစ်ကြမ်း ဖုန်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရအလွန်ခေတ်နောက်ကျနေသည်။ အလယ်ဗဟိုကိုနှိပ်လျှင်နောက်ဘက်၏ flex ၏လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးတစ်ခုပလပ်စတစ်နောက်ကျောတစ် ဦး နှင့်အတူကောင်းစွာလက်ထပ်မပေးပါဘူး dual- ဓာတ်ပုံကင်မရာကို။ ဒါပေမယ့်ဒါ Bluboo S3 အတွက်သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အလယ်ပိုင်းအပေါ်ပိုင်းတွင် dual-lens ပါသည့်ကင်မရာတစ်ခုရှိသည် ဒေါင်လိုက်။ သူ၏ဘယ်ဘက်သို့ကြည့်ပါ နှစ်ချက် Led flash ကို အလွန်ကောင်းသောတောက်ပပါဝါနှင့်အတူ။
ကင်မရာ၏အောက်ဘက်တွင်ရှိပြီးနောက်ဘက်တွင်ထည့်သွင်းထားသောသတ္တုအပိုင်းအစတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည် လက်ဗွေဖတ်စက်။ ကင်မရာနှင့်အလွန်နီးကပ်သောတည်နေရာကကျွန်ုပ်တို့အားခြေရာခံရန်အကြိမ်များစွာစိုက်စေသည်။
box ကိုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, ငါတို့ကဲ့သို့ငါတို့သည်အတွင်း၌ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရာအားလုံးကိုပြောပြပါ။ သင်ကယူသောအခါအလွန်လေးလံသောခံစားရသည့်စက်ကိရိယာအပြင်, ငါတို့ရှာပါ အေးအေးဆေးဆေး။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်းတင်းကြပ်စွာလိုအပ်သောထက်အများကြီးပိုရှာမထားဘူး, ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်သူအချို့အပိုအသေးစိတ်ရှိပါတယ်သောအခါ, ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပြောပြပါ။
ပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါတို့ရှိသည် cable ကိုအားသွင်းနေစဉ် နှင့်ရပ်တန့်အတူဤကိစ္စတွင်အတွက်ဒေတာဆက်သွယ်မှု USB အမျိုးအစား C။ ထို့အပြင်သူ့ကို လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Transformer, ဥရောပ format နဲ့လာပါတယ်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Bluboo S3 မှာပလတ်စတစ်အချောကိုင်ထားတဲ့ကျောရိုးရှိပြီးဆံပင်ကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ကအဲဒါကိုဟောင်းနွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်မပျက်စီးစေချင်ဘူးဆိုရင်၊ သူရဲ့သေတ္တာထဲမှာလက်ဆောင်တစ်ခုရပါတယ် အနက်ရောင်ဆီလီကွန်အမှု.
ကျနော်တို့ဆီလီကွန်အမှုအမြဲတန်ဖိုးထားကြောင်းပြောဖို့ရှိသည်။ ဒီအမှုဟာကိရိယာကိုအံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့်အလွန်ရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထိတွေ့မှုကပျော့ပျောင်းပြီးပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်ထက်ပိုပြီးဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြောသလိုပဲ, ပလပ်စတစ်ကျောရုပ်ဆိုးလျှင်။ ဆီလီကွန်အမှုဖွင့်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းကို ပို၍ ပင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။
ငါတို့လည်းတစ် ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် screen saver အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ဖန်ထည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်တန်ဖိုးထားသည်။ 3.5 Jack audio port ကိုကိရိယာတစ်ခုဖြင့်ဖိအားပေးသည့်အခါကိရိယာတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နားကြပ်ကို USB Type C port သို့ချိတ်ဆက်ရန် adapter.
စူးစမ်းလိုစိတ်တစ်ခုအနေဖြင့် Bluboo S3 ၏ box အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်aအထွက်သုံးမျိုးနှင့် USB ကြိုးမရ။ USB Type C output ကြောင့်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ device ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင် mini USB output ရှိပြီး iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သံသယမရှိဘဲအသုံးဝင်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုတန်ဖိုးထားသည်။
Bluboo S3 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ဖန်သားပြင် ၆ လက်မ Sharp6x 1080 IPS LCD (FHD +)
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 7
Processor ကို MediaTek MT6750T Octa-Core -4x 1.5GHz ARM-A53 Cortex -4x 1.0 GHz
GPU ကို ARM Mali-T860 MP2
RAM ကို4GB ကို
ROM မှတ်ဉာဏ် 64 GB ကို
နောက်ကင်မရာf/ 21 CMOS အာရုံခံကိရိယာပါသည့် Samsung Dual5+ 2.0 Mpx
ရှေ့ကင်မရာ Samsung 13 Mpx
ဘက်ထရီ 8.500 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 75.5 x ကို 157.8 x ကို 11.6
အလေးချိန် 280 ဂရမ်
စြေး 199.99 €
ဝယ်ယူ link ကို BLUBOO S3
မျက်နှာပြင်ကြီးနှင့် resolution ကြီးမားသည်
S3 ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်မျက်နှာပြင်အတွက် Bluboo သည်ရွေးစရာရှိသည် နွယ်နှင့်အတူထုတ်လုပ်သူ။ ထိုအလက်မှတ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် ထက်သော။ တစ်ဦး ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် ၏အချိုးအစားအတွက် format ၂၁: ၉ ရှုထောင့်။ ရှိပါတယ် resolution ကို 1080 x ကို 2160 pxဆိုလိုသည်မှာ Full HD ကို +တစ်သိပ်သည်းဆနှင့်အတူ တစ်လက်မလျှင် 402 pixels ရှိသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန်လုံလောက်သောထက်ပိုသော resolution ရှိသောမျက်နှာပြင်ကြီး။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ရှုရန်။ ကျိန်းသေကောင်းတဲ့အရွယ်၊ ပို။ ပို။ ဝေး5လက်မကနေသုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေတဲ့အရာပါ။
Androidsis မှာကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်တွေကိုသစ္စာစောင့်သိတဲ့ကာကွယ်သူတွေပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် smartpon ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များမှပြုလုပ်သောအလုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချီးကျူးသည်။ ငါတို့ဘယ်လိုမြင်လဲ ပိုကြီးသောဖန်သားပြင်များသည်ပုံမှန် (သို့) အရွယ်အစားဖုန်းများထက်ပိုနည်းသည်။ ထို့ကြောင့် ၆ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်မှုမရှိဘဲစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုသည်။
ခုခံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ Bluboo S3 ၏မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ထားသည် Corning Golilla Glass 4မရ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြစ်ရာများနှင့်အလွန်ပြင်းထန်သောဒဏ်ချက်များကိုခံနိုင်ရည်မရှိကြောင်းသေချာသည်။ မျက်နှာပြင်၏အစွန်းတစ် ဦး ရှိသည် 2.5D round glass ကြောင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော curvature။ ပြီးတော့ဖန်သားပြင်ထဲကိုဖန်သားပြင်ထဲထည့်သွင်းခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။
မျက်နှာပြင်ရဲ့ထောင့်ချိုးတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်။ သူတို့ကမျက်စိကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသွင်အပြင်ပေးတယ်။ ပြီးတော့အောက်ဆုံးနှစ်ခုလုံးက free space ကကင်မရာ၊ စပီကာ၊
Bluboo S3 ၏ Hardware နှင့် Power
Bluboo S3 တွင် MediaTek ပရိုဆက်ဆာပါရှိသည်။ ဤအချိန်သူသည်ရွေးချယ်ခဲ့သည် MediaTek MT6750T။ တစ် ဦး က Processor ကို Octa-Core4x 1.5GHz ARM-A53 Cortex -4x 1.0 GHz။ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်များစွာအတွက်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များဖြင့်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ Asus, Oppo, ZTE သို့မဟုတ် Alcatel ကဲ့သို့အမှတ်တံဆိပ်များကယုံကြည်ရသော MediaTek MY6750T
Bluboo တွင်တစ်ခုရှိသည် 4GB RAM အရာချောမွေ့စွာစီးဆင်းရန် device ကိုများအတွက် amply အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ RAM ကိုဖြည့်စွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းရည်တစ်ခုရှာသည် 64GB သိုလှောင်မှု။ ငါတို့လိုချင်တာကိုသိမ်းဆည်းရန်အမြန်နှုန်းနှင့်နေရာမရှိခြင်းကြောင့်ကောင်းမွန်သောတွဲဖက်မှုတစ်ခုသေချာသည်။
ဂရပ်ဖစ်အတွက် Bluboo S3 တွင်aGPU ကို ထို့အပြင်လူသိများသည် ARM မာလီ T860 MP2။ ၎င်း၏ RAM မှတ်ဉာဏ်၊ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် CPU သည်ဖုန်းကိုမည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်မည်သည့် application သို့မဟုတ် game နှင့်မျှဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုမိပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့သတိထားမိနိုင်ပါပြီရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယိုများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည် အလွန်အကျွံအပူ terminal မှ ငါတို့ခဏတာ“ ကန်” သောအခါအပူချိန်အလွန်များစေသည့်ဖုန်းတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီးကတည်းကအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ အကယ်စင်စစ်ဆီလီကွန်အမှု၌ဤသည်ကိုသိသိသာသာမဟုတ်ပေမယ့်နောက်ကျောအစိတ်အပိုင်းကယ့်ကိုပူလာတယ်။
တစ်ဖန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး အကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည် ခေတ်မမီတော့သော Android ဗားရှင်းနှင့်စမတ်ဖုန်းသစ်သည်စျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်သည်မရ။ Bluboo S3 တွင်ဗားရှင်းရှိသည် အန်းဒရွိုက် 7.0 လာမည့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သတင်းမရှိပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သောနောက်ထပ်ဖုန်းသည် Android ၏ဗားရှင်းဟောင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
Bluboo S3 သည် Android 7.0 နှင့်အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိရန် ပို၍ အရေးကြီးသည် box ကိုသူ့ဟာသူ၌တည်၏သတ်မှတ်ချက်များအပိုင်း၊ Android 8.0 ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည့်အရာတစ်ခုခုသည် Bluboo ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည် (သို့) အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ငါတို့သုံးခွင့်ရတဲ့ device ကနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမရှိဘူး။
သူ၏မျက်နှာသာ၌သူရှိကြောင်းပြောရပေမည် အလွှာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောအလွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့ Android Oreo နှင့်အလုပ်လုပ်နေပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Bluboo S3 နှေးကွေးစွာရွေ့လျားနေသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဂူးဂဲလ်သည် ပိုမို၍ တင်းကြပ်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအလွှာအတွက်မူ၎င်းသည်လုံးဝထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ မည်သည့်ညှိနှိုင်းမှုသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်မှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ Android7ကိုသုံးနေတယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတစ်ရံမေ့သွားလို့ဒါကိုမျက်လုံးပြူးစေတယ်။
Bluboo S3 ကင်မရာများနှင့်ဓာတ်ပုံပညာ
ဓာတ်ပုံကဏ္ section သည်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်နှင့်အတူဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအားရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ငါတို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည့်အခြားစမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့ စက္ကူပေါ်တွင် Bluboo S3 တွင်ကင်မရာကောင်းသည်မရ။ ဒါပေမယ့်ဒီအပိုင်းကအမှတ်ကောင်းကောင်းရဖို့အမြဲတမ်းမလုံလောက်ပါဘူး။
အဆိုပါ Bluboo S3 တစ်ရှိပါတယ် နောက်ကင်မရာနှစ်ခု မှန်ဘီလူးများကိုအခြားတစ်ခု၏အထက်၌ဒေါင်လိုက်နေရာချထားသည်။ Bluboo သည် S3 ကင်မရာအပိုင်းကို Samsung အားအပ်နှင်းထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကင်မရာရှိသည် 21 Mpx resolution နှင့်5Mpxမရ။ ပြီးတော့အဲဒါတစ်ခုရှိတယ် focal aperture 2.0 ပါသော CMOS sensor, လုံလောက်သော?
ယူဓာတ်ပုံတွေအတွက် ကောင်းသောသဘာဝအလင်းနှင့်အတူ, အ ရလဒ်များကို သား လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အဆိုပါ အရောင်များ ရလဒ် အနည်းငယ်ပြည့်နှက်နေသည်ပြီးတော့ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာသူတို့ကြည့်ရတာတော်တော်ကြည့်နေတယ် သူတို့အမှန်တကယ်ထက်ပိုမိုတောက်ပသည်။ ဒါပေမယ့် resolution နဲ့ဂတ်စ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရလဒ်ကောင်းတွေရတယ်။ တူညီသောအရောင်အရိပ်နှင့်ပြည့်သောဓာတ်ပုံတွင်အာရုံခံသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုပြသသည်။
En ရှုခင်းဓာတ်ပုံများ ကျနော်တို့အချို့သတိထားမိ ပြတ်သားမှုဆုံးရှုံးမှုအထူးသဖြင့်ပိုမိုဝေးကွာသောအရာများနှင့်ယုတ္တိရှိသည်။ သော်ငြားလည်း ကျနော်တို့ရလဒ်များကိုမကောင်းတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့မရပါဘူး ရရှိသော။ The အရောင်အကွာအဝေး ပြသသည် ကျယ်ပြန့် နှင့်အဓိကပုံစံများရှင်းပါတယ်။
ပြproblemနာက zoom နဲ့ပါမရ။ ထုံးစံအတိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ချဲ့ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၏အရည်အသွေးသည်အမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းများကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ Bluboo S3 နှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တွေ့သည် အဲဒီအရောင်တွေရဲ့တောက်ပမှု ငါတို့လည်းပြောနေကြတာလေ ပုံစံများအတွက်အတန်ငယ်မှေးမှိန်။ resolution မရှိခြင်းကိုချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်ပုံသဏ္expectedာန်များသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပို၍ ပို၍ ပြတ်သားပုံကိုမြင်နိုင်သည်။
ငါတို့လည်းမကြိုက်ဘူး Blur လို့ခေါ်တဲ့ gradient effect ဒီကိရိယာပေါ်မှာ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခါအာရုံတွင်တည်နေမည့်ပုံ၏အရွယ်အစားတစ်ခုထက်နည်းသည်ကိုရွေးနိုင်သည်။ အချက်ကအဲဒါပဲ ဒီကိရိယာကအရမ်းတိကျတယ်။ အဓိကပုံရိပ်ကိုအလယ်ဗဟိုတွင်ထားခြင်း၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ခုခုကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖန်သားပြင်ကိုထိခြင်းပင်လျှင်ရလဒ်မှာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ပါ။
ကင်မရာ၏မျက်နှာသာအတွက်ကျနော်တို့ကပြောရပေမည် အနီးကပ်ရိုက်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောရိုက်ချက်များရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးစွာသောပြတ်သားမှုကိုစောင့်ရှောက်မည်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ resolution ။ ထိုထက်ကား, ပုံစံများအတွက်အလွန်ထိုက်တန်သောအရောင်များနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အစုံ။
ဒီ Bluboo S3 ၏အခြားရှုထောင့်၌ရှိသကဲ့သို့, ဓာတ်ပုံကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည် ငါတို့ထင်တယ် ဘက်မလိုက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောကဏ္inများတွင်ရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့ပြီးအခြားသူများကိုစိတ်ပျက်စေခဲ့သည်။ ကောင်းသောအရာများသည်သင်၏ကင်မရာကပေးသောမကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှကျဆင်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။
Bluboo S3 တွင်aရှိသည် သင်၏အမှောင်ဆုံးအလင်းများကိုပေးနိုင်သောနှစ်ဆ LED မီး။ အလင်းရောင်နှင့်ဆန့်ကျင်။ နေ့အလင်းရောင်ရှိသည့်အချိန်၌ပင်အလင်းပိုလိုအပ်သည်။
ထဲမှာ ရှေ့ကင်မရာ ငါတို့လည်းတစ် ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အာရုံခံကိရိယာ Samsung မှလက်မှတ်ထိုး။ ဘယ်တော်တော်လေးလျောက်ပတ်သော resolution ရှိပါတယ်။ ကင်မရာဖြင့် 13 Mpx ကျွန်ုပ်တို့၏ selfies သည်အရည်အသွေးနိမ့်သည်။ ဓာတ်ပုံကုမ္ပဏီ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီများရှေ့ကင်မရာရှိသည်ကိုတွေ့ရလျှင်ကောင်းသည်။
Bluboo S3 ဘက်ထရီသည်၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသည် Bluboo သည်အလေးချိန်အလွန်ကြီးသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ box ကိုထဲကသတိထားမိတစ်ခုခုပါပဲ။ အခြားကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည်။ သို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးသောအခါ၎င်းသည်အလွန်လေးလံလာသည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်မျှမဟုတ်ပါ။ Bluboo S3 သည်အလေးချိန် ၂၈၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည်မရ။ အချို့အတွက်၊ အခြား terminal တစ်ခုအားအလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သောထူးခြားချက်တစ်ခု။ ဒါပေမယ့်ဘာလဲ အခြားများစွာအတွက်၎င်းမရှိပါ Tal သီလ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုကဲ့သို့သောအလေးချိန်ကြောင့်အဘယ်အရာကိုတန်ဖိုးထားသိ။ အားလုံးအထက်။
တစ်ဦးနှင့်အတူ 8.500 mAh ဘက်ထရီ Bluboo S3 တွင်ခဏတစ်ဖြုတ်ကြိုးရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီပါတဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတောင်သိပါတယ်။ ၎င်း၏ကြာချိန်ပီတိကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်ခဲ့သည်မရ။ အတော်လေးတော်ရုံတန်ရုံ device ကိုသုံးခြင်းဖြင့်၊ သုံးရက်အထိကြာခဲ့သည် အသုံးပြုမှု၏။
တစ် ဦး ထားရန်, ငါတို့ရည်ညွှန်းသည် အပူ ငါတို့ Bluboo S3 ကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီ။ သင်မိနစ် ၃၀ ခန့်တေးဂီတသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းစက်သည်အပူလွန်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ ဒီအပူချိန်မြင့်တက်မှုအားလုံးသည်ကိရိယာ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုမထိခိုက်စေသော်လည်း။
ဒါဟာတစ်ခုရှိဖို့လည်းကောင်းတယ် အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းထောက်ခံပါတယ်သောဘက်ထရီ။ ကိရိယာကိုသုံးရက်ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအားသွင်းရန်တစ်နာရီသာလိုအပ်ခြင်းသည်တကယ့်အားရစရာဖြစ်သည်။ charger သည်နေ့စဉ်အခြေခံအားဖြင့်သယ်ဆောင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများမဟုတ်တော့ပါ။
အဆိုပါ Bluboo S3 ရှိပါတယ် တစ်ခုတည်းပြင်ပစပီကာ။ အားလုံးနီးပါးထုတ်လုပ်သူများအတွက်စံဖြစ်လာပြီးတစ်ခုခု။ စျေးကွက်ထဲရှိပြင်ပစကားပြောသူများ၏အောင်မြင်မှုကိုပေးသောအမှားတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်။ စတီရီယိုအသံနှင့်ကြီးမားသောအသံစွမ်းအားများကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်စျေးကွက်တွင်ထိခိုက်နိုင်သည်။
ကမ်းလှမ်းတဲ့ဖုန်းရှိတယ် အသံပါဝါ။ အ အသံအတိုးအကျယ် ကြောင်းရောက်ရှိအလုံအလောက်ထက်ပိုသည် တေးဂီတဖွင့်ရန် ကောင်းစွာနားထောင်ပါ အိမ်ပြင်မှာတောင်။ ဒါပေမယ့်ရုံပါပဲ။ အသံကရှင်းပါတယ် ကျနော်တို့တုန်ခါသို့မဟုတ်ပုံပျက်သတိထားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အသံတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲစပီကာတစ်ချောင်းရှိခြင်းဖြင့်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်မှတ်သားပါ အပြုသဘောဆောင် ငါတို့တွေ့ပြီ FM ဖမ်းစက်။ ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ရာခိုင်နှုန်းများစွာအသုံးပြုသည့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်ရေဒီယိုသည်ဘယ်တော့မှမလုံလောက်ပါ။ ပြီးတော့ဒေတာဆက်သွယ်မှုကိုမလိုပဲတိုက်ရိုက်ရေဒီယိုကိုနားထောင်နိုင်ခြင်းဟာအမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဂီတကိုနားထောင်ရန် adapter ကြိုးလိုအပ်သည်။ USB Type C အတွက် connector ပြောင်းလဲမှုကြောင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်များမှဂျက် connector ကိုအမြဲတမ်းဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းသည်အပြီးသတ်မရနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Bluetooth နားကြပ်များမရှိလျှင် adapter အသုံးပြုရန်မှာကြိုတင်ထက်နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းနှင့်ပိုတူသည်။
Bluboo S3 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုကြိုက်သည်
ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရ ဦး မည်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြင်နှင့်အတူ Bluboo S3 သည်မျှတမှုမရှိဟုထင်ရသည်။ သငျသညျကိုတှေ့မွငျခဲ့ကြပေမည်သကဲ့သို့ငါတို့သည်တွေ့ ကကောင်းစွာကာကွယ်ရသောရှုထောင့်နှင့် ပိုပြီးနှိမ့်ချသောအခြားသူများ။ တချို့အချက်တွေတောင်မှဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရသလိုပဲ ကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားခြားနားမှု.
ထို့ကြောင့်, စူးစမ်းလေ့လာလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောရှုထောင့်များကိုအကောင်းအဆိုးဆိုးများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်ရှေ့မျက်နှာပြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာနောက်ဘက်၏တည်နေရာပင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကနောက်ကျောဘက်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအဆီအမှားတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားတယ်။
La ဘက်ထရီသက်တမ်း ၎င်းသည်၎င်း၏အင်အားအကောင်းဆုံးအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိရိယာတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းချက်ကို ၂ ရက်ထက်ပိုသောအရာအတွက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်မှာအလွန်ကောင်းသည်။ ပြီးတော့ ဝန် ဒီဘက်ထရီ၏တစ် ဦး ထွက်သယ်ဆောင်သည် လျင်မြန်စွာကောင်းပြီ, အများကြီးပိုကောင်း။
El မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား အဲဒါအောင်မြင်မှုပါ။ ဈေးသက်သာတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်ခုမှာ ၆ လက်မဖန်သားပြင်ကိုတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်။ ထိုလည်းတစ်ရှိပါတယ် ကောင်းသော resolution အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတတ်နိုင်သမျှကျေနပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းတစ်လုံးရှိဖို့အတွက် "pro" ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားသည် FM ရေဒီယို။ တေးဂီတ၊ သတင်း၊ ပရိုဂရမ်များအားလုံးသည်ဒေတာသုံးစွဲမှုပြbeingနာမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
အလေးချိန် ဒါကအတားအဆီးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အလွန်ပါးလွှာသောဖုန်းဒီဇိုင်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောဈေးကွက်တစ်ခုတွင် Bluboo သည်ရေရှည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည်။ ဒါကအလေးချိန်ကိုရောက်ရှိစေသည် 280 ဂရမ်မရ။ အချို့အတွက်အလွန်အကျွံ၊ အခြားသူများအတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၊ သို့သော်လေးလံသောအလေးချိန်
El ပူနွေးလာတယ် ကျွန်ုပ်တို့ Bluboo S3 သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ပူစေသည်။ Netflix မှာရုပ်ရှင်ဖွင့်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်နာရီဝက်ကြာ Spotify ကနေတေးဂီတကိုဖွင့်ရုံပဲဆိုတော့ဖုန်းကပူလာတယ်။ အကောင့်ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်၌တည်၏။
El လက်ဗွေဖတ်စက် အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာကိုလျင်မြန်စွာသော့ဖွင့်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဖုန်းလုံခြုံရေးအတွက်၎င်းသည်အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ Bluboo S3 ၏လက်ဗွေရာဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည် သိပ်မကောင်းပါဘူး။ ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ချင်တာထက်စာဖတ်ခြင်းပိုလိုအပ်တယ်။ ငါတို့ထင်တယ် မတိကျနှေးနှေး.
imprecise fingerprint reader
အကယ်၍ Bluboo S3 ကသင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါကသင်ဒီမှာ ၀ ယ်နိုင်သည်။ BLUBOO S3.
သုံးသပ်ချက် - Rafa Rodríguez Ballesteros
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Bluboo S3 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
Raskulls ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ - ယခုပင်လျှင်: Fruit Ninja ကိုဖန်တီးသူများမှများစွာသောဂိမ်းများ
Xiaomi Mi Band3ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ